मापसे चेकिङमा युवतीसँग ट्राफिकले मागे किस | EuropeNepal.Net
मापसे चेकिङमा युवतीसँग ट्राफिकले मागे किस
00Europe Nepal Thursday, November 20, 2014
Trafic offers kiss with young lady in Ma Pa se Checking
काठमाडौं । चेकिङका क्रममा सामान्यतः ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स र ब्लुबुक माग्छन् । तर, मादक पदार्थ सेवानको चेकिङमा एक ट्राफिक प्रहरीले युवतीसँग किस मागेका छन् ।
Cheacking the course of the traffic police usually ask foralicense and blubuka. However, drug allergies sevanako cekinama whatatraffic police have asked for.
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग सिंहदरबारमा कार्यरत असई पुरुषोत्तम ढकालले चेकिङका क्रममा युवतीसँग कागजपत्र नभएपछि किस मागेका हुन् । प्रहरी आचरण विपरीतको काम गरेको भन्दै असइ ढकाल निलम्बनमा परेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
डिल्लीबजारमा सोमबार बेलुका मापसे चेकिङमा खटिएका असइ ढकालले ‘एक किस दिए कारबाही नगर्ने’ भन्दै एक युवतीलाई दुव्र्यवहार गरेको ट्राफिक महाशाखाका एक अधिकारीले बताए । युवतीले उजुरी गरेपछि ढकाल कारबाहीमा परेका हुन् ।
प्रहरीका अनुसार चेकिङका क्रममा स्कुटीमा सवार ती युवतीसँग कागजपत्र थिएन । तर, आफूलाई छाडिदिन युवतीले असइ ढकाललाई आग्रह गरेकी थिइन् । तर, ढकालले आफूलाई एकपटक किस गरे कारबाही नगर्ने भन्दै बार्गेनिङ गरेका थिए । पछि उनी डिल्लीबजारबाट अनामनगरसम्म ती युवतीकै स्कुटरमा थिए ।
युवतीको मोबाइल नम्बर लिएर बेलुकासमेत असइ ढकालले उनलाई फोन गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । स्कुटरमा चढेका बेला आफूमाथि दुव्र्यवहार गरेको आरोप युवतीको छ ।
EuropeNepal.Net: मापसे चेकिङमा युवतीसँग ट्राफिकले मागे किस